» अलपत्र परेका सुन्दर स्याङ्तान भनिने हेटौँडाका यी बालक को हुन् ? सक्दो शेयर गरौँ
अलपत्र परेका सुन्दर स्याङ्तान भनिने हेटौँडाका यी बालक को हुन् ? सक्दो शेयर गरौँ
हेटौँडा, २७ फागुन । मकवानपुरको हेटौँडा निवासी एक बालक काठमाडौँमा फेला परेका छन् । आईतबार गोकर्ण नगरपालिकाको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर वरपर भेटिएका बालकले आफ्नो नाम सुन्दर स्याङ्तान भएको बताएका छन् । ११ वर्षीय उक्त बालकले आफ्नो बुवाको नाम सुनबहादुर तामाङ र आमाको नाम आईतीमाया तामाङ बताएका छन् ।
हेटौँडाको कार्की डाँडा घर बताउने उक्त बालकलाई काठमाडौँमा महिनाको ३ हजार तलब लिने गरी घरायसी बच्चा हेर्ने काममा राखेको बुझिएको छ । बालकले आफ्नो दाईको नाम सोमबहादुर र दिदीको नाम सोममाया भएको बताएका छन् । काठमाडौँ माकलबारी निवासी सिता भट्टराईले उनलाई भेटेकी हुन् । उनको बारेमा माकलबारी सानो पुलमा अवस्थित पुलिस चौकीमा पनि खबर गरेको उनले बताएकी छिन् । लेख्न पढ्न नआउने उक्त बालकलाई कार्पेट कारखानामा खाना बनाउने र बच्चा हेर्ने गरी काममा लगाएको बुझिएको छ । उक्त बालकलाई काममा ल्याउनेले छ्याङ खाएर उनलाई कुट्ने गरेको पनि बताइएको छ ।
बालकलाई भेट्टाएकी भट्टराईले फेसबुक लाईभ मार्फत सूचना पुराउन सबैलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले बौद्ध अथवा माकल बारीको पुलिस चौकीमा सम्पर्क गरी बालकलाई जिम्मा लिन उनका आमाबुवासँग अपिल गरेकी छिन् । उनको मोबाईल नम्बर ९८४९६५०६५२ मा फोन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । बच्चा फेला पार्ने महिलाको लाईभ भिडियो हेर्नुहोस्– यहाँ क्लिक गर्नुहोस्